Ashley Cole oo ay FA-gu ku heystaan inuu hadalo qalad ah u adgeegsaday akoonkiisa Twitter. - Caasimada Online
Home Warar Ashley Cole oo ay FA-gu ku heystaan inuu hadalo qalad ah u...
Ashley Cole oo ay FA-gu ku heystaan inuu hadalo qalad ah u adgeegsaday akoonkiisa Twitter.
Daafaca kooxda Chelsea Ashley Cole ayaa galay qalad iyadoo xiriirka kubada cagta Ingiriisku ay falkaas daba joogan ka dib markii FA-gu ay sharaxaad ka bixiyeen sabababihii loo cuskada ganaaaxa afarta kulan ah ee John Terry.
Cole ayaa loogu wacay inuu marqaati ka noqdo intii ay socotay dacwadii uu saxiibkiis John isaga difaacaayey hadii isir naceyd ka ahaa ee uu u adeegsaday daacafa QPR Anton Ferdinand, waxaana loogu yeeray si looga helo akoonkiisa su’aalo lagu kalsoonaan karo.
difaacii hore ee kooxda Arsenal Cole ayaa ku qoray akoonkiisa Twitter: “Hahahahaa, wax wanaagsan ayey sameeyeen #FA-gu miyaan been sheegay, #BUNCHOFT****.”
Cole ayaa taageeray saxiibkiisa ahna kabtanka Chelsea John Terry intii ay socotay dacawadii maxkamada madaniga ah 23dii October 2011, markaasoo Terry lagu waayey wax dambi ah.